खेलकुदको ब्यबसायीकरणका लागि यो प्रतियोगिता महत्वपूर्ण ः धमला | KhelkudNews.com
Published on January 12, 2018, by Manoj Shiama - Posted in Featured, Slideshow 0
बाग्लुङको बुर्तिवाङ बजारमा पांचौ पुरुष तथा प्रथम महिला राष्ट्रिय आइ. टि. एफ. तेक्वान्दो प्रतियोगिता शुक्रबार सुरु हुदै छ । ढोरपाटन आइटिएफ तेक्वान्दो दोजाङको आयोजना बाग्लुङ जिल्ला आइटिएफ तेक्वान्दो संघको सह आयोजना र नेपाल अन्तराष्ट्रिय तेक्वान्दो महासंघको संरक्षणमा हुने प्रतियोगिताको तयारी सकिएको छ । प्रतियोगितामा स्पेशल फ्रि स्पाइरिङ्ग, पुरुष (५५–६३) के.जी र महिला (४७–५५) के.जी समुह गरी विभिन्न दुइ बिद्यामा प्रतियोगिता गरिने छ । प्रथम हुनेले ५ सय अमेरिकी डलर, स्वर्णपदक र प्रमाणपत्र, दोश्रो हुनेले ३ सय अमेरिकी डलर, रजत पदक र प्रमाणपत्र र तेश्रो हुनेले २ सय अमेरिकी डलर, काश्यपदक र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
खेलमा भाग लिने खेलाडी न्यूनतम ब्ल्याक बेल्ट तथा विगतमा राष्ट्रिय स्तरको खेलमा उपलव्धि हासिल गरेको हुनुपर्र्ने आयोजकले जनाएको छ । यसै प्रसंगमा केन्द्रित रहेर नेपाल आइटीएफका अध्यक्ष अन्जन धमलासंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप
यो खेलको कत्तिको महत्व देख्नु भएको छ ?
खेलकुदलाई ब्यबसायीकरण गर्ने सवालमा यो प्रतियोगिता महत्वपूर्ण रहेको छ । खेल खेलेर जिविकोर्पावन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापीतत गर्न यो प्रतियोगिता महत्वपूर्ण छ ।
तयारीबाट सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?
एकदमै सन्तुष्ट छ । यहाँका साथीहरुले लामो समय देखि मिहेनत गरेर यसको तयारी गरिरहनु भएको थियो । जसका कारण प्रतियोगिता ब्यबश्थत रुपले सम्पन्न हुने छ भन्नेमा बिश्वस्त छु ।
संगठनको केन्द्रिय नेतृत्वभन्दा तलका साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिएकोले जोखीम महशुष भएन ?
उहाहँरुले पहिलो पनि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गरिसक्नु भएको थियो । यसकारण हामी बिश्वस्त थियौ । संयोजक रहनु भएका भुपेन्द्र पुनः,तुलसी थापा लगायत सम्पूर्ण खेलाडीहरु ब्यबस्थापनमा पूर्ण देखिनु भएको छ ।
प्रतियोगिताका लागि केन्द्रिय संघको सहयोग कस्तो रह््यो ?
हामीले प्राबीधीक, भोतीक र आर्थीक तीनै ढंगको सहयोग गरेका छौ ।
ढोरपाटन अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिताका लागि सक्षम छकी छैन ?
यहाँको तयारी र हाम्रो जनशक्तिको कारण त सम्भब देखिन्छ । तर, यो नै सबै होइन । पूर्वाधारको कारण अहिले त केही कठिन होला । भबीश्यमा यहाँ त्यो कुराको पनि विकास भए सम्भवना हुन सक्छ ।